GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish Fon French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
M na-echeta na Jehova na-enye anyị ihe ndị ga-enyere anyị aka ịna-edi nsogbu anyị. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru na ọ bụrụgodị na mmadụ anyị bụ n’elu ahụ́ na-ala n’iyi, a na-eme ka mmadụ anyị bụ n’ime “dị ọhụrụ kwa ụbọchị.” (2 Ndị Kọrịnt 4:​16) Ọ bụ nnọọ otú ọ dị m.
Ihe ị ga-echebara echiche: Ọ bụrụ na e nwere ọrịa ọjọọ gị na ya na-alụ, gịnị mere i ji kwesi ịna-akpa ndị ọzọ nso? Ọ bụrụkwa na ahụ́ dị gị, olee otú i nwere ike isi nyere onye na-arịa ọrịa aka?​—Ilu 17:17.
Ndị okenye ọgbakọ anyị na-enyere m ezigbo aka. Ha na-abịa eleta m, na-ajụkwa m otú m mere. Otu okenye gwara m na m chọhaala onye m ga-akọrọ otú obi dị m, mụ kpọọ ya, mgbe sọkwara ya bụrụ. M na-ekele Jehova kwa ụbọchị maka ụdị enyi ndị a.​—Aịzaya 32:​1, 2.
Ihe ị ga-echebara echiche: Olee otú ndị hụrụ gị n’anya nwere ike isi nyere gị aka idi ọrịa ọ bụla ị na-arịa?​—Ilu 24:10; 1 Ndị Tesalonaịka 5:​11.
Nwanne m nwaanyị nyeere m ezigbo aka. O nyeere m aka ka obi ghara ịna-ajọkarị m njọ. Ọ gwara m na m kwesịghị ikwe ka ụjọ jide m n’ihi na ọ ga-eme ka ike ụwa gwụ m. Ọ gwakwara m ka m na-ekpechi ekpere anya n’ihi na Jehova na-aghọta ihe mụ na ya na-alụ karịa onye ọ bụla ọzọ.​—1 Pita 5:7.
Amụtala m na e nweghị ihe o mere ma obi jọọ mmadụ njọ maka nsogbu bịaara ya. Ma, onye ahụ ekwesịghị ikwe ka obi ọjọọ ahụ mee ka ike ụwa gwụ ya ma ọ bụkwanụ mee ka ya na Chineke gharazie ịdị ná mma. Ọ bụghị Chineke na-akpata nsogbu anyị, ọ gaghịkwa ahapụ anyị ma ọ bụrụhaala na anyị emee ka ife ya bụrụ ihe kacha mkpa ná ndụ anyị.​—Jems 4:8.
Ahụ́ Ike Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị Ndị Na-eto Eto
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme Ma Ahụ́ Adịghị M? (Nkebi nke 3)
ijwyp isiokwu 46